महिला स्वास्थ्य - मेरो खबर -
स्तन क्यान्सर : जोखिम र बच्ने उपाय
स्तनका कोषहरू असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि स्तन क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ । सामान्यतया कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ । तर, जब शीघ्र रूपमा र धेरै मात्रामा कोषहरू वृद्धि र विभाजन हुन्छन्, पुराना कोषहरू टाँसिएर गिर्खा वा ट्युमर बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो प्रक्रिया क्यान्सर नहुने वा हुने दुवै प्रकृतिको हुनसक्छ । क्यान्सर हुने प्रकृतिका ट्युमरले नजीकका तन्तु तथा अवयवहरू नष्ट गर्छन् । ती ट्युमर शरीरको अन्य भागमा फैलिन सक्छन् । शल्यक्रिया गरेर हटाए पनि फेरी उत्पन्न हुन्छन् र धेरै हानीकारक हुन्छन् । स्तन क्यान्सर प्रायः...
बजारमा पाईने हरेक बस्तुहरु चाहे त्यो कस्मेटिक उत्पादकसंग जोडिएको होस या खानेकुरासंग जोडिएका कुराहरु हुन्, हामी ती बस्तुहरुमा सजिलै विश्वास गरेर खरिद गर्ने गर्दछौँ । ती कुराहरु भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा त्यस्ता चिजहरु खरिद गरेका हुन्छौँ । यसका बाबजसद पनि बजारमा उत्पादन गरिएका कतिपय उत्पादकहरु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाईदाजनक भएपनि कतिपय बस्तु यस्तो हुन्छन् जसले ज्यानै जान सक्छ । त्यस्ता उत्पादक मध्ये लामो समयसम्म सील प्याक गरिएको बस्तु । आफ्नो शरीरलाई सफा राख्नको लागि आमी दिनहुँ साबुन र श्याम्पुको प्रयोग गर्छौ । साबुनको...
बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ ? स्वस्थ बच्चा जन्माउन यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं– सुन्दर र स्वस्थ बच्चाको चाहना नराख्ने को होला ?वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका अधिकांश दम्पतीको एउटै सुन्दर सपना हुन्छ, स्वस्थ बच्चा जन्माउने ।तर, सबैले सोचेजस्तो र कल्पना गरेजस्तो बच्चा पाउन सकिरहेका छैनन् । नचाहँदा नचाहँदै पनि केही परिवारमा रोगी र विकलांग बच्चाको जन्म हुने गरेको छ । कतिपय घरमा यस्ता बच्चाको जन्मले खुसी ल्याउन सक्दैन । चिकित्सा क्षेत्रमा भएका अध्ययनअनुसार करिब ३० प्रतिशत बच्चा जन्मँदा नै कम वजन भएको, विकलांग, दृष्टि नहुने तथा विभिन्न रोग लिएर जन्मन्छन् । यस्ता बच्चामध्ये केहीको एक महिनाको अवधि नपुग्दै मृत्यु समेत हुन्छ । यसले परिवारमा...
डन्डीफोर हटाउने ७ उपाय
सुन्दर देखिन को नचाहला र । तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्नेवित्तिकै कहाँ बनाउन सकिन्छ र । अझ अनुहारमा आउने अत्याधिक डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ । सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ । डन्डीफोरबाट छुटकारा दिलाउने केही घरेलु उपाय यस्ता छन् । ...
पेटको धर्सा हटाउन यी ५ उपाय अपनाउन सकिन्छ(थाहा पाउनुहोस)
धर्सा भनेको गर्बवती महिलाको ज्यानमा मात्र हुन्छ भने छैन । मानिस एकै पटक मोटायो वा महिलाहरु गर्भवती हुँदा पेट, छाती, तीघ्राको छालामा यस्ता धर्साहरु देखा पर्छन् । यसलाई खास नौलो मानिदैन । एक पटक बसिसकेका धर्सा हटाउन त्यति सजिलो छैन । तर असम्भव पनि छैन । शरीरमा बसेका धर्सा हटाउने केही प्राकृतिक उपायहरु छन् । १. घ्यूकुमारीः घ्यूकुमारीलाई अचेल धेरैले एलोभेरा भन्दा चिन्छन् । एलोभेरा काटेर धर्सा परेको भागमा केही समय दल्नुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले धुनुहोस् । तपाई यो प्रक्रियामा एक चौथाई एलोभेराको जेल, भिटामिन ए, इको क्याप्सुललाई आपसमा मिसाएर पनि दिनहुँ दल्न...
चरम सुख भनेको के हो, र यो कसरि प्राप्त हुन्छ?
यौनचाहना प्रकृतिले मानिसलाई दिएको एक विशेÈता हो । सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौनचाहना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताको लागि पनि आवश्यक छ । तपाईं र तपाईंकी श्रीमती दुवैमा पर्याप्त यौनचाहना हुनु राम्रो कुरा हो । तपाईंलाई थाहै हुनुपर्छ कि यौनसम्बन्धी हाम्रा चासो र चाहनाहरू मस्तिष्कबाट शुरू हुन्छन् । मस्तिष्कको हाइपोथलामस भन्ने सानो अंगले यौनसम्पर्क राख्नेजस्ता आधारभूत व्यग्रता प्राणीमा उत्पन्न गर्दछ । यसैगरी अर्को अंग सेरबरेल कर्टेले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरूलाई रेकर्ड गर्ने कार्य गर्दछ । यौनसंवेदनशीलता सम्बन्धी कुराहरू पनि यसै भागबाट सञ्चालित...
यौन उत्तेजना, अज्ञान, भ्रम र यौन मनोविज्ञानमा जान्नैपर्ने पक्ष
थुप्रै मानिस यौन समस्या लिएर अस्पताल या डाक्टरकहाँ आउँछन् । खासगरी यौन इच्छामा कमी आउने, यौनक्रियामा विर्य छिट्टै खस्ने, यौन उत्साह नहुने, यौन इच्छा बढी हुने, हस्तमैथुन गर्ने तथा निद्रामा स्खलन हुने समस्या लिएर । मानिसमा यौनको उत्तेजना मनोवैज्ञानिक तरिकाबाट निस्कन्छ । जब यौनका बारेमा सोचिन्छ वा यौनक्रिया अगाडि हाम्रो सोचाइले मस्तिष्कमा रहेको पिट्युटरी ग्रन्थीबाट उत्तेजनाको सुरुवात हुन्छ, तब हर्मोन सञ्चालन भई हाम्रो यौन अंगलाई उत्तेजित पारी पुरुष र महिलाका यौनांगबाट एक प्रकारको रस निस्कन्छ । जसले वंशाणुगत गुण सन्ततिमा सार्न सहयोग गर्छ र मानिसलाई उत्तेजित...
पेट र कम्मरको बोसो घटाउने सात सजिला तरिका
कम्मर र पेटतिर बोसो जम्मा हुनु समस्या निकै बढ्दो छ । पेटमा वा कम्मरमा बोसोको मात्रो धेरै भयो भने धेरै प्रकारका रोग निम्तिन्छन् । सुन्दरतामा पनि कमी ल्याउँछ । पेट र कम्मरतिर लागेको बोसो घटाउने साता सजिला आइडिया निम्नप्रकार छन् । १) कम्मरमा रहेको बोसो घटाउन बोसोजन्य खानाको मात्रा बढाउनुपर्छ । तर, यसरी बढाइने फ्याटजन्य खानामा ‘मोनोअनस्याचुरेटेड फ्याट्टी एसिड (एमयूएफए) बाहेक अर्काे खालको फ्याट हुनु हुँदैन । क्यालोरी र एमयूएफए उच्च भएको खाना खाने महिलाको कम्मर एक महिनामै एकतिहाइले घटेको एउटा अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो । भोजनमा एमयूएफए सुनिश्चित गर्न हरेक...
यौनका औषधीय गुण
यौन जीवनको प्रेम व्यक्त गर्ने तरिका, प्राकृतिक आवश्यकता मात्रै होइन, यो उपचारको पद्धति पनि हो । यौनमा सक्रिय व्यक्ति अन्यको तुलनामा स्वस्थ हुने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । केही समयअघि ब्रिटिस अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अध्ययनअनुसार सातामा दुई वा त्यसभन्दा बढी यौनमा संलग्न हुने पुरुष कम यौन क्रियाक्लापमा संलग्न हुने पुरुषको तुलनामा हृदयाघातको खतरा कम भएको पाइएको थियो । यो अध्ययन ९ सय पुरुषमा गरिएको थियो । यौनका लागि उत्तेजित हुनेबित्तिकै पल्स रेट प्रतिमिनेट ७० देखि १ सय ५० सम्म पुग्छ । त्यसैगरी मनको धड्कन पनि बढ्छ, रगत तीव्र रुपमा पम्प हुन्छ...
सेक्ससम्बन्धी ७ अनौठा तथ्य
यौन स्वास्थ्य सम्बन्धिमा वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान पश्चात बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गरेका छन । वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका केहि तथ्यहरु निम्नानुसार छन; १. पुरुष वीर्य महिलाको योनिभित्र ५ दिनसम्म जीवित रहन सक्छ । ५ दिनको अवधिमा यसले महिलाको अण्डालाई सेचन पनि गर्न सक्छ । तर, बाहिरी वातावरणमा भएको वीर्य केही घण्टामात्रै बाँच्न सक्छ । २. यदि पोथी फेरिट (दुम्सीजस्तो एक प्रकारको जनावर) तातो भएको बेलामा तत्काल यौनसम्पर्क गर्न भाले पाएन भने मर्न सक्छ । तातो लामो समयसम्म रह्यो भने एस्ट्रोजेनको लेभल बढ्छ, जसले अप्लास्टिक एनिमिया हुन्छ र यो जनावरको मृत्यु हुन्छ । ३....
महिला थाइराईडको समस्याः बच्न के गर्ने ?
आजभोलीको तनावग्रस्त र भागदौडको जीवनमा थाइराईड समस्या बढीरहेको छ । यो समस्या महिला पुरुष दुवैमा देखिए पनि विशेष गरी महिलामा बढी देखिन्छ । आजभोलि त थाइराईडको समस्याले साना उमेरका महिलालाई पनि सताएको देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार १०० जनामा ८० महिलालाई थाइराईको समस्या हुन्छ । हाम्रो घाँटीको अगाडीको भागमा थाइराइड ग्रन्थी हुन्छ । जसले थाइराइड हर्मोन नामक हर्मोन उत्पादन गर्छ । सोही हर्मोनलेनै हाम्रो शरिरको अंगको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्छ । तर जब थाइराईड ग्रन्थीको प्रणालीमा बाधा उत्पन्न हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउने गर्दछन् । तथ्यांकले लाखौं मानिस...
हुन त महिलाहरु प्राकृतिक रुपमा नै निकै आकर्षक मानिन्छन | सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गर्छ व्यायमले | दैनिक व्यायम गर्ने महिलाहरुको सरिर निकै फुर्तिलो अनि अझ बढी आकर्षक हुन्छ | विशेषगरि महिलाहरु वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि व्यायममा कम अनि काम र घर परिवारमा बढी ध्यान दिने गर्छन | जसले गर्दा उनीहरुको ज्यान फुर्तिलो हुन पाउदैन | यसको असर स्वास्थ्यमा त पर्छ नै संगसंगै यौन जीवनमा पनि यसको नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ | वैवाहिक जीवनलाई सुखी अनि सन्तुस्ट बनाउन सफल यौन जीवनको ठुलो भूमिका हुन्छ | यौन सम्पर्क बाट बढी आनन्द प्राप्त गर्नको लागि स्वस्थ रहनु संगसंगै सरिरमा लचकता...
सुपर सेक्सका सुत्रहरु
यौन आनन्द आफैँमा एउटा सुन्दर अनुभूति हो । तर, केही कुरामा ध्यान दिन सकियो भने सेक्सलाई ‘सुपर सेक्स’ बनाउन सकिन्छ । एक अनुसन्धानअनुसार यौनको बढी भन्दा बढी आनन्द लिनका लागि केही सामान्य कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । ‘क्यानेडियन जर्नल अफ ह्युमेन सेक्सुवालिटी’मा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार ग्रेट सेक्स’ का लागि यौनपार्टनरसँग मानसिक रुपमा तालमेलको जरुरी छ । दुवैबीच संवादको समेत एकरुपता आवश्यक पर्छ । एक आपसमा आ–आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउनु सुपर सेक्सका अर्को सूत्र हो । अनुसन्धानमा भनिएको छ, ‘सँगै हुँदा हरेक क्षण पूर्ण रूपमा रमाइलो तरिकाले जिउने...